Ny sary an-tendrombohitra tsara indrindra ho an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ny sary an-tendrombohitra tsara indrindra ho an'ny Mac
Ity sary ity dia toa mahazatra anao. Ity no wallpaper nosafidian'i Apple ho an'ny kinova macOS Mojave. Izy io dia fanehoana tsara ny zavatra miandry antsika ato amin'ity lahatsoratra ity izay ahitanao be dia be tsara tendrombohitra wallpapers. Na dia marina aza fa ity sary ity dia an'ny efitr'i Mojave ary fasika izy ireo, dia tsy hilaza amiko ianao fa tsy afaka maneho tanteraka izany, satria mampahatsiahy ahy ny tendrombohitra. Manantena aho fa mankafy ny atiny be dia be ianao ary tadidio fa raha mitady wallpaper tsara ianao dia manana lahatsoratra roa teo aloha foana izay ahitanao ny 50 fiaviana tsara indrindra na mandositra ao ny sasany amin'ireo tora-pasika ireo.
Afaka manomboka amin'ny sasany amin'ireo vola izay Apple dia ampiasaina amin'ny rafitra fiasan'izy ireo. Ny sasany amin'izy ireo dia manana tendrombohitra ho mpilalao fototra. Avy eo dia avelao ho anao ilay nampiasaina ho an'ny macOS El Capitan. Araka ny hitanao any ambadika any, na dia tsy ny tendrombohitra ihany aza no mpilalao fototra, dia afaka mankasitraka azy ireo isika ary afaka mahita ny fiandrianany. Miaraka amin'ny lanitra feno kintana, izy io dia manasa anao handany ny alina ao amin'ny fandinihana ny haben'ny zavaboary ary mampahatsiahy antsika ny maha-kely antsika.
Dika hafa izay nampiasain'i Apple ho an'ny wallpaper macOS El Capitan Io no avelanay ho anao manaraka. Mandeha amin'ny alina isan'andro izahay nefa mitovy hatsarana. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia manana sarin'ny tendrombohitra izay toa tsy azo hiakarana noho ny fitsanganany ary manome ny Mac-ntsika ny tsy fahafatesana. Miaraka amin'io tendrombohitra io izay toa manjaka amin'ny zava-drehetra ary toa efa niaraka tamintsika hatramin'ny fiandohan'ny andro. Raha ny marina, raha tsy fantatrao, dia heveriko fa El Capitan dia tendrombohitra iray izay hita ao amin'ny valan-javaboary Yosemite, anarana iray hafa voafidy ho an'ny iray amin'ireo rafitra fiasa Apple izay ho hitanao eto ambany.
Avy eo dia avelanay aminao ny fiaviana izay nampiasain'i Apple ho an'ny dikan-teny macOS Sierra. Tendrombohitra misy lanezy misy masoandro mamely azy moramora. Miezaka ny hahafantatra aho raha fiposahan'ny masoandro na filentehan'ny masoandro. Miloka amin'ity farany aho, saingy sarotra ny milaza izany amin'ny tifitra akaiky. Ity iray ity dia mifantoka amin'ny tendrombohitra ary mino aho fa fahombiazana tanteraka izany.
Mitovy amin'ny zandriny, raha azo lazaina, ny fanambanin'ny High Sierra macOS miompana amin’ny tendrombohitra koa izy io. Saingy amin'ity indray mitoraka ity dia manana sary misokatra kokoa isika, izay ahitana singa maro hafa ao amin'ny sarintany. Manana farihy isika, hazo maro ary mazava ho azy ny tendrombohitra. Toa ny lanezy voalohany manomboka milatsaka amin'ny fararano ao amin'io faritra io izy ireo. Ny loko tsy mampino amin'ity sary ity dia mahazatra amin'ny vanim-potoanan'ny fotogenika indrindra amin'ny rehetra. Wallpaper mendrika ho ankafizina isaky ny apetraka amin'ny Mac.
Ankehitriny dia manana ny dikan-ny macOS Yosemite. Ho fanomezam-boninahitra ny valan-javaboary any atsinanan'i San Francisco, any Kalifornia, Etazonia. Nantsoin'ny UNESCO ho Lova Iraisam-pirenena izy io tamin'ny 1984 ary izy koa no zaridaina voalohany nalamin'ny governemanta federaly an'i Etazonia. Raha ny marina, raha tia sary ianao dia ho fantatrao fa ny iray amin'ireo rain'ny sary maoderina, Ansel Adams, dia naka sary imbetsaka ny valan-javaboary. Mendrika ny hijery ny sarinao izy ireo. Raha ny marina dia hamela ny roa amin'izy ireo ato amin'ity lahatsoratra ity aho satria na dia mainty sy fotsy aza izy ireo dia ho hitanao ny tanjany ary mazava ho azy ny zava-misy amin'izy ireo. Tsy misy fanovana solosaina, mivoatra ao anaty efitrano maizina miaraka amin'ny teknika tonga lafatra.
Yosemite nataon'i Ansel Adams. Ataovy misokatra ny sainao ary aza mieritreritra fa tsy mahafinaritra ny mainty sy fotsy. Ho tianao ny dikan-ny El Capitan. Raha mandinika tsara ny sary ianao, dia ho hitanao fa ny fampiasana fakan-tsary miaraka amin'ny teknolojia kely kokoa noho ny amin'izao fotoana izao, dia afaka naka ny jiro sy ny aloky ny lohasaha rehetra. Ankoatra izany, tsy misy pixel iray amin'ny sary tsy misy fampahalalana. Ny zava-drehetra dia manana ny antsipiriany, na dia ny aloka lalina indrindra aza. Mahagaga ny mahita ilay sary.
Raha jerena ny sary nampiasain'i Apple ny tendrombohitra tamin'ny rafitra fiasany, dia hiroso amin'ny fisafidianana wallpapers hafa isika azonay ampiasaina amin'ny Mac.
Manomboka amin'ny wallpaper izay, na dia tsy tena izy aza, dia tsy latsa-danja amin'ny maha-zava-dehibe azy ary ho tsara tarehy toy ny sary an-tsarimihetsika amin'ny solosaina. Feno tendrombohitra izay mpilalao fototra amin'ity lahatsoratra bilaogy ity, manana ny zava-drehetra tokony ho angonin'ny desktop desktop tsara. Ny hatsaran-tarehy, ny tanjaka ary ambonin'ny habaka rehetra mba ho hita tsy misy olana ny kisary misy ny programa na ny rakitra ampiasaintsika isan'andro. Landscape izay Enga anie mba hahita isa-maraina aho rehefa manokatra ny masonao ianao.
Miaraka amin'ity lafika na sary manaraka ity ho an'ny Mac-nao, te hanakatona azy ianao ary handeha hanao dia. dia toerana mahagaga ary azoko antoka fa hampiasainao hijerena ny endriny amin'ny endriny. Efa lazaiko aminareo fa mahavariana ary anisan'ireo nofidiko, indrindra amin'ireo vanim-potoana antomotra ny fety. Manosika ahy hanana tanjona hialana amin'ny monotony ary te hitady zavatra hafa. Ity tontolo ity dia mitondra ahy ary mitondra ahy ho amin'ny fahasambarana tanteraka.
Nanontany tena aho raha hampiditra ity sary manaraka ity. Saingy tsy maintsy manao izany aho. Raha manana ny dikan'ny tendrombohitra El Capitan ho fiavian'ny macOS izahay ary manana ny dikan-tenin'ny Ansel Adams lehibe, maninona raha manana ny dikan'ny tendrombohitra eo afovoan'ny ririnina? Tokony hapetraka izany, miatrika sary iray izay mampiseho antsika ny lohasaha miaraka amin'ny hatsarany sy ny hamafin'ny vanim-potoana ririnina.
Ny wallpapers roa manaraka dia avy amin'ny, angamba ny tendrombohitra telo malaza indrindra eto an-tany. Farafahakeliny telo amin'ireo malaza indrindra. Ny voalohany amin'izy ireo dia Tendrombohitra Fuji. Ny tampon'isan'ny avo indrindra ao amin'ny nosy Honshu sy manerana an'i Japana, manana haavo 3776 metatra. Eo anelanelan'ny prefektioran'i Shizuoka sy Yamanashi any afovoan'i Japana ary andrefan'i Tokyo no misy azy. Ny faharoa dia mifanitsy amin’ny tendrombohitra avo indrindra eran-tany. Everest, manana haavo 8848 metatra, any amin'ny kaontinanta Aziatika, any amin'ny Himalayas, indrindra ao amin'ny faritry ny tendrombohitra Mahalangur Himal. Farany ilay iray ho ahy dia iray amin'ireo tendrombohitra tsara tarehy indrindra misy. Ny matterhorn. Any amin'ny Alpes, manamorona an'i Soisa sy Italia. Tendrombohitra pyramidaly midadasika saika symmetrika izay 4.478 metatra ny tampony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny sary an-tendrombohitra tsara indrindra ho an'ny Mac
Ho avy any amin'ny firenena maro tsy ho ela ny HomePod mini
Dropbox dia manomboka manandrana ny fampiharana Apple Silicon-compatible